Huawei သည် Honor V10 ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်လန်ဒန်တွင်တင်ဆက်မည် Androidsis
Honor V10 ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ပြသပါမည်
Huawei သည်အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ယခုနှစ်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည် သန်း 100 ကျော်ရောင်းချခဲ့သည် ထုတ်ကုန်များ၏။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအောင်မြင်မှု၏အလွန်ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များပေးသောဖုန်းများအနက်တစ်ခုမှာဖြစ်သည် Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 10။ အခုတော့ကုမ္ပဏီကအလားတူသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူဖုန်းအသစ်ပြင်ဆင်နေသည်။ The V10 ဂုဏ်ပြုပါ.
အဲဒါဖုန်းပဲ ဒုတိယအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာစျေးကွက်ဝင်တိုက် ၏လက်မှတ်၏။ ဒါပေမယ့်ဒီကုမ္ပဏီကဒီပစ္စည်းအသစ်ရဲ့ specs တွေကိုလျှော့ချတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤသည် Honor V10 အများကြီးကတိပေးထားတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲကိုသိနိုင်ပါပြီ။
Huawei သည်ကောလာဟလများနှင့်ပေါက်ကြားမှုများကိုရှောင်ရှားလိုခဲ့သည် တိုက်ရိုက်ဒီဖုန်း၏တင်ဆက်မှုကြေညာခဲ့သည်။ ဖုန်း၏တင်သည့်နေ့နှင့်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်ပါပြီ။ ဤဖြစ်ရပ်သည်များစွာသောအတွေးများထက်စော။ ဖြစ်မည်။ Honor V10 ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ပြသပါမည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ထို့ကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။
ပွဲတော်ကျင်းပမည့်နေရာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသောမြို့သည်လန်ဒန်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်တွင်လန်ဒန်ရှိ Honor V5 ကိုပြသသွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေသည့်ခဏတစ်ခုမှာဤပစ္စည်းသည်များစွာကတိပေးပုံရသည်။
ဒီကိရိယာရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် အလားတူသတ်မှတ်ချက်များကို Mate 10။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်စျေးနှုန်းသိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည် အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာများတွင်ပေါက်ကြားခဲ့ရာကနေ ဒီဖုန်းရဲ့စျေးနှုန်းကအများကြီးနိမ့်ပါလိမ့်မယ် အထက်ဖော်ပြပါ Mate 10. ကိုဤဆက်ဆက်ဒီမော်ဒယ်များ၏ရောင်းအားကူညီနိုင်တစ်ခုခု။
ဒီဇိုင်းအတွက်ကြောင့်ကောလာဟလဖြစ်ပါတယ် Honor V10 သည် frame မပါဘဲ screen ပေါ်တွင်လောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် 16 + 20 megapixel ကင်မရာ။ ဖုန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာပရိုဆက်ဆာတစ်ခုပါရှိပါတယ် Kirin 970, အတွင်း၌ Mate 10 နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အချို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ်။
ယခုချောင်းမြောင်းနေသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်လန်ဒန်ရှိ Honor V5 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည်. ဒီကိရိယာကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » Honor V10 ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ပြသပါမည်
Xiaomi က Mi A1 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း